Iibhulukhwe zeblue Blues. Udliwanondlebe nombhali weNkampu | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Iincwadi zoLutsha
Ukufota: Ijini eblue. Iphepha likaFacebook.
Iijini ezibhlu, mbumbulu igama umbhali Sevillian UFrancisco de Paula Fernandez, inoveli entsha kwinto yayo ephumeleleyo, eyimpumelelo kwaye esele ikho indlela ende ngakumbi kuncwadi lolutsha. Ibizwa ngokuba sisihloko Inkampu kwaye iyi Thriller Apho athe wanobuganga bokubamba imfihlakalo malunga nokusweleka kwiimeko ezingaqhelekanga ezenzeka kwinkampu eyazinyaswa ngabantu abancinci abavela kwimvelaphi eyahlukeneyo. Kule udliwano ndlebe Isixelela ngayo nokunye okuninzi. Ndiyalixabisa kakhulu ixesha lakho nobubele bakho.
UNCWADI NGOKU: Inkampu yinoveli yakho entsha, apho usuke khona kwimixholo yeencwadi zakho zangaphambili. Usixelela ntoni ngayo kwaye yavela phi le mbono?
BJ: Andicingi ukuba ndiye kude kangako. Kwenzeka ntoni ukuba ngoku eyona nto iphambili inikezelwe kwimfihlakalo, kodwa isenestampu esinye seBlue Jeans ngokufanayo. Ingumdlalo wolutsha ovela kwincoko phakathi kweqabane lam kunye nam sivalelwe ngokupheleleyo. Kwafika kuye ukuba anokuhlukanisa amakhwenkwe enkampini ngaphandle kweeselfowuni kwaye ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi kwaye ukusuka apho ndenza ibali.
BJ: Ngokunyanisekileyo andikhumbuli. Njengomntwana ndafunda kakhulu kuba abazali bam bobabini bayazifunda kwaye bendihlala ndihlala ndingqongwe ziincwadi. Mhlawumbi ibali lam lokuqala elibhaliweyo yayilibali elifutshane apho umntu asweleke khona kwimidlalo yeqonga, kwaye ekugqibeleni kufunyaniswe ukuba umbulali ndim (okanye into enjalo). Nangona into yokuqala endiyikhumbulayo sisincoko malunga nokuhleka ababendithumele eklasini.
B.J.: Agatha Christie sisalathiso sam kuphela. Ndifunde yonke into ngaye. Andinababhali abaninzi bentloko: UCarlos Ruiz Zafón, uTolkien, uJulio Verne… Ndifunde nayo yonke into malunga UDolores Redondo o UJohn verdon, umzekelo.
BJ: Mhlawumbi ukuya I-Poirot okanye kuSherlock Holmes. Ndiyabathanda abalinganiswa abakrelekrele nabathathayo.
BJ: Bendihlala ndibhala kwiivenkile zekofu de ubhubhane uhlasele. Andikwazi ukuthula xa ndibhala kwaye, ngokuchaseneyo, nditsho nengxolo encinci yokufunda. Nangona ndingenazo izinto endizithandayo kakhulu kwinto enye okanye kwenye.
BJ: Zonke iinoveli zam, ngaphandle Inkampu, Ndibabhalile kude nekhaya. Ndiyathanda bhala ngengxolo, ujonge abantu abeza bephuma. Andikwazi kuchaza ukuba kutheni, kuba andizazi. Iivenkile zokwenza ikofu zaba ziiofisi zam. Ukuze ndi leer Ndikhetha ukuba njalo endlini kuthe cwaka esofeni okanye ebhedini.
B.J.: Ihamba ngamaxesha. Inoveli mnyama, i ba vuyayo, i imfihlakalo… Ngaba yilento ndihlala ndiyifunda. Kodwa ndifunde kakhulu inoveli yembali Ngelo xesha kwaye ndizama ukugcina ixesha kunye neencwadana zentsha ezibalaseleyo, ukuba ndixelelwe ngezinto ezifundwa ngabantu abatsha kunye nezinto ezenziwa ngabalingane bam eklasini.
BJ: Ndikwi Misa umfundi ngoku. Ndineenoveli ezininzi ezisalindelweyo ezinje Ezinzulwini zobusukuNguMikel Santiago, Umnyango, nguManel Loureiro okanye Umdlalo womphefumlo NguJavier Castillo. Andibhali nam, nangona andicingi ukuba kuya kuthatha ixesha elide ukuhlala phambi kwekhompyuter kwaye ndikhangele ibali elitsha.
BJ: Abapapashi bayachacha kwingxaki ye-coronavirus kwaye ndicinga ukuba khange basokole kangako njengoko bekulindelwe, nangona kucacile ukuba onke amacandelo afumene ubunzima. Lizwe elinzima nelomhlaba, ke ukunikezela ixesha elininzi koku kufuneka unike zonke iintsuku ezingama-365 ngonyaka. Ubuncinci yile nto ndiyenzayo. Ngaphambi kokuba ndiyifeze, ndizamile ukuthumela kunye Khange ndiyifumane okokuqalaNgapha koko, bonke abapapashi bandala. Kodwa Khange ndinikezele, Ndabona ukuba iinethiwekhi zentlalo kunye ne-Intanethi zinokuba sisixhobo esihle kunye nomboniso olungileyo wokufikelela kubafundi kwaye ndiyabulela kuluntu endilwakhele kwinethiwekhi endikwaziyo ukuyipapasha Iingoma zikaPaula. Sele kuyiminyaka elishumi elinambini ukusukela ngoku, Iinoveli ezilishumi elinesine kwintengiso, nangona Kusekuninzi ekufuneka ndikufundile.
BJ: Kunzima kakhulu. Andiqondi ukuba ubhubhane, intsholongwane kunye nento eyenzekayo inento elungileyo. Kuyacaca ukuba, kungekudala okanye kamva, konke oku kuya kuvela kuthotho, iincwadi kunye neemovie. Masithembe ukuba asizukugqibela ngokugcwalisa abantu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » Iijini ezibhlu. Udliwanondlebe nombhali weNkampu